मन्त्री ढकाल भन्नुहुन्छ : ७२ प्रतिशत जनतालाई कोभिड खोप उपलब्ध गराउँछौँ…हेर्नुहोस् । – yuwa Awaj
मन्त्री ढकाल भन्नुहुन्छ : ७२ प्रतिशत जनतालाई कोभिड खोप उपलब्ध गराउँछौँ…हेर्नुहोस् ।
काठमाडौं : स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री भानुभक्त ढकालले कोभिड–१९ विरु’द्धको खोप ७२ प्रतिशत जनतालाई उपलब्ध गराउने बताएका छन्। भरतपुर अस्प’तालको आज आ’कस्मिक सेवा भवन र सरुवा रो’ग सेवा भवनको शिलान्यास कार्यक्रमलाई
सम्बोधन गर्दै उनले १४ वर्ष मुनिकाका बालबालिकाका लागि खोप परी’क्षण नै नगरिएकाले लगाउन नमिल्ने बताए। “खोप कति अनुदानमा र कति खरिद गरेर ल्याउने भन्ने विषयमा सरकारीले निर्णय गर्नेछ”, उनले भने,“खोप विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले प्रमाणित गरे लगत्तै नेपालमा पनि उपलब्ध हुन्छ।”
मन्त्री ढकालले को”रोना उ”पचार र नि”यन्त्रणका लागि सरकारले ग”रेको काम उ”ल्लेखनीय रहेको ब”ताउँदै आर्थिक रुपमा वि”कसित देशसमेत यसको उपचार र रो”कथामका लागि घुँ”डा टे”केका छन्। तर हामीले ग”रेको सेवा ग”र्ब गर्न ला”यक छ भने ।
को”रोनाबाट ब”च्नका लागि सामाजिक दू’री नै महत्वपूर्ण रहेको छ”, उनले भने,“कुनै जा”त, धर्म, लि”ङ्ग, आ”स्थाका आधारमा यो रो”ग ला”ग्ने होइन, साझा मो”र्चाबाट काम गरेर रो”गलाई निय’न्त्रण गर्नुपर्छ।” सरकारले तो”केको स्वास्थ्य मा”पदण्ड पा”लना गर्न उनले आ”ग्रह गरे।
प्रतिनिधिसभा सदस्य कृष्णभक्त पोखरेल, भरतपुर महानगरपालिकाका प्रमुख रेनु दाहाल, मन्त्रालयका नीति योजना तथा अनुग’मन महाशाखा प्रमुख डा. गुणराज लोहनी, अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष डा. भोजराज अधिकारी, अस्पतालका निमित्त मेडि’कल सुपरि’टेण्डेण्ट डा. जगन्नाथ
तिवारी, पूर्वमेडिकल सुपरि’टेण्डेण्ट प्राडा कृष्ण पौडेल, अस्पतालका निमित्त मेट्रोन ९नर्सिङ प्रमुख० शान्ता भण्डारीलगायत बोलेका थिए। कार्यक्रममा ५० श्य’याको दुई तले सरुवा रो’ग अस्पताल भवन र ५० श्ययाको आ’कस्मिक कक्ष
भवन बन्ने जानकारी दिइयो। सरुवा रोग भवन निर्माण गर्न आठ करोड रुपैयाँ बजेट सरकारले विनियोजन गरिसकेको छ। क्रमा’गत योज’नाअन्तर्गत दुई वर्षमा सम्पन्न हुनेछ।
आकस्मि’क कक्ष भवन एक वर्षमा सम्पन्न गर्ने योजना रहेको छ। ११ करोड रुपैयाँ लागतमा निर्माण सम्पन्न हुने अनुमान गरिएको भवनको लागि सरकारले नौ करोड रुपैयाँ ब’जेट विनि’योजन गरिसकेको छ।
Prevकान्छो सिइओ, जसको तलब साढे दुई करोड…हेर्नुहोस् ।
Nextनारायणकाजी श्रेष्ठ भन्नुहुन्छ : राजतन्त्र पुनःस्थापनाको माग प्रतिगामी, सफल हुँदैनन्…हेर्नुहोस् ।
सियोनको लागि पौल शाहले गरे दशैंको टीकाको दिन दशैं दक्षिणा स्वरुप एक लाख सहयोग… हेर्नुहोस्।
कुन समयमा खाने गहुँको रोटी ? यो समयमा रोटी खाँदा हुन्छ फाइदाजनक…हेर्नुहोस् । जानकारीको लागि पूरा पढि सेयर गर्नुहोस् ।